Baarlamaanka Hir-Shabeelle ayaa ku kala jabay
Mudanayaasha baarlamaanka Hir-shabeelle ayaa waxaa ka dhex taagan khilaaf ku saabsan maareynta 17 kursi oo haweenka loo qoondeeyay, taasi oo salka ku heysa qoondada haweenka ee dhanka sharci dajinta.
Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Hir-Shabeelle C / xakiin Luqmaan, ku xigeenadiisa iyo qaar ka mid ah Guddiyada Baarlamaanka ayaa saacadihii la soo dhaafay ka shirayay sida loo qabanayo maamulka iyo qorshaha guud ee ku aadan dejinta qoondada haweenka.
Doorashadii labaad ee baarlamaanka Hir-shabeelle oo aan waqti badan qaadan ayaa la sheegayaa inay harsan tahay kuraas loo qoondeeyay haweenka, waxaana hada muran ka taagan yahay cida la siinayo kuraasta iyo sida beelaha loo qeybsanayo sida ay Axadle u sheegeen ilo wareedyo.
Galmudug ma ku fashilantay sugida amniga wadada isku xirta…
Xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyay in la kordhiyo tirada kuraasta baarlamaanka si looga fogaado khilaafaadka salka ku haya qabiilka, halka qaar kalena ay ku doodayaan in haweenka kaliya la siiyo, isla markaana beelaha la siiyo kuraas ku saleysan shahaadooyin. .
Tirada Xildhibaanada isdiiwaan galiyay ee Hir-shabeelle waa 99, waxaana harsan kuraasta harsan oo lagu buuxinayo xiisada taagan iyo sida loo xalin karo, maadaama haweenka ay doonayaan in guud ahaan gacanta loo galiyo, waxaana jiray buuq badan oo ka yimid Afhayeenka sida Cabdixakiin Luqmaan Sheekh Maxamed & ku xigeenkiisa 1aad Siraaji Sheekh Isaaq.
Haddii la ansixiyo, 17-ka xubnood ee Baarlamaanka Hir-Shabeelle waxay yeelanayaan 116 xubnood, taasoo ka dhigeysa Baarlamaankii labaad ee ugu weyn ee shaqeeya muddo ku dhow saddex bilood, marka laga reebo doorashada. ka kororsiga ay sameeyeen.
Jurgen Klopp ayaa weeraray Manchester United